8 -da moobiil ee ugu wanaagsan meel dhexe - Sebtember 2021 | Androidsis
Telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan
Jose Alfocea | | Aaladaha Android
Haddii aad ku fikireyso inaad cusbooneysiiso mobilkaagii hore oo aadan diyaar u aheyn inaad qatar gasho adoo iibsanaya taleefan aad u jaban, laakiin aadan rabin in lagaa tago iyadoo jeebkaaga qaawan yahay, markaa telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah Waa meesha ugu habboon ee lagu sameeyo baaritaanka iyo xulashada bartaada cusub. Si kastaba ha noqotee, waxaan horeyba kuugu dhiirrigeliyay in go'aankan uusan noqon doonin mid sahlan, sababaha ayaa ku bilaabmaya fikradda Mid-Range lafteeda.
Qadka dhexe, sida fikrad ahaan, waa fikrad aad u shakhsi ah, oo waliba si aad ah ay u isticmaalaan soosaarayaasha, iyagoo ka warqaba in aysan u qalmi karin xaruntooda sida dhamaadka sare, sidoo kale ka fogaanaya fikradaha ah in ka hadalka dhamaadka-hooseeya ay keeni karto. Iyada oo ku saleysan tixgelinnadaas, maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan isku dayi doonnaa inaan wax yar iftiiminno si aan u fahanno waxa dhexdhexaadku ka jiro adduunka ee taleefanka, oo waxaan qaadan doonaa fursad aan ku soo jeedino tobanka moobiil ee khadka dhexe ugu fiican inaad ka heli karto suuqa maanta.
1 Telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan
1.2 Xiaomi Redmi 4
1.3 Sharaf 8
1.4 Jiilka 5aad Moto G
1.5 Sharaf 6C
2 Waa maxay casriga dhexe
2.1 Awooda iyo waxqabadka
2.2 Tayada qalabka iyo qaybaha
Aan aragno waxa ay noqon karaan telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah ee suuqa hadda jira.
Waxaan ku bilaabaynaa "jawharadan" dhexda-dhexaadka ah ee ah Huawei P9 Lite, taleefan casri ah oo aad ku heli karto wax yar 200 € oo ay ku jiraan shaashad 5,2-inch ah oo Full HD ah, processor sideed-core ah, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo keydinta gudaha ah, dareeraha faraha, 13 MP kamarad weyn oo leh flash LED iyo autofocus, 8-inch camera hore megapixels, 3.000 mAh baytariga iyo inay ka samaysan tahay bir.
Waxaan ku sii wadaynaa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad ee ka dhex shaqeeya mobilada dhexdhexaadka ah, Xiaomi Redmi Note 4 oo aad ka iibsan karto iibiyaasha kala duwan ee Spain qiimo ku dhow 155-175 euro qiyaastii loogu talagalay nooca 32 GB, iyo inta udhaxeysa 195-220 euro qiyaastii. Loogu talagalay nooca 64 GB ee keydinta. Redmi Note 4 waxay u taagan tahay shaashadeeda 5,5-inch Full HD, Mediatek Helio X20 processor oo ay wehliyaan 3 ama 4 GB oo RAM ah iyo 32 ama 64 GB oo keyd ah iyo kamarad weyn oo 13 megapixel ah oo leh f / 2.0 aperture iyo laba laydh LED ah. Si kastaba ha noqotee, sida ugu fiican oo dhan waa iyada madaxbanaani weyn mahadsanid 4.100 mAh baytariga.
Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan waa Sharaf 8 laga bilaabo Huawei, a terminaalka bartamaha-aad ee aadka ugu dhow dhamaadka-sare, Ama waxaa laga yaabaa runtii runti heer sare ah? Sidaan kuu sheegay, khadka wax lagu qaybiyo aad ayuu u khafiifsan yahay. Waxay leedahay shaashad dhan 5,2-inch oo Full HD ah, naqshad dhan-bir ah, afar geesle ah Kirin 950 (is-sameyste) processor oo ay wehliyaan 4 GB oo RAM ah, 32 GB oo keyd ah sidoo kale waxay kujirtaa akhristaha faraha iyo kamarad weyn 12 megapixel iyadoo diiradda lasaarka ee bixiya a ka-celcelis ahaan qadarka sawirada lagu qaado iftiinka hoose.
Jiilka 5aad Moto G
Liistada sidan oo kale ah waligaa kama maqnaan doontid terminaal ka socda Motorola - Lenovo, halkanna waa ku leenahay. Isagu ma yahay Jiilka 5aad Moto G leh 5-inch Full HD screen, processor Qualcomm Snapdragon 430, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo ROM ah, batari 2.800 mAh, 13 megapixel camera iyo Android 7 Nougat sida nidaamka qalliinka. Intaa waxaa dheer, waxaa laga sameeyaa gebi ahaanba aluminium la safeeyey oo siinaya muuqaal quruxsan. Haddii aad jeceshahay, waxaad ku heli kartaa oo keliya 190 euro.
Waxaan ku celcelinaa sumadda maxaa yeelay haddii miisaaniyaddaadu ay adag tahay waad heli kartaa tan Sharaf 6C ilaa 200 euro qiyaas ahaan, dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh shaashad 5-inji ah, processor sideed-core ah, 3GB RAM, 32GB ROM, 3.020 mAH batteri, Kamaradda weyn ee 13 megapixel iyo nidaamka hawlgalka Ansdroid Marshmallow oo loogu talagalay hoosta shirkadda EMUI lakabkeeda.
Iyada oo dhadhan Isbaanish ah waxaan leenahay BQ Aquarius U Plus, mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan ee aan ku qaban karno in ka yar 200 euro. Waxay leedahay shaashad 5-inji Full HD ah, processor Snapdragon 430, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo keyd gudaha ah, 3.080 mAh batari si ay u sii socoto maalinta oo dhan iyo nidaamka qalliinka Android 7.1.1 Nougat in moodello yar aad ka heli doonto.
Inbadan oo aan la aqoon waa Elephone S7, shaki la'aan mid ka mid ah boosteejooyinka ay tahay inaad tixgeliso markaad dooranaysid sababteeda Shaashad dhan Full HD 5,5-inch oo ay ilaalinayso Gorilla Glass 3, been abuur, Helio X20 deca-core processor oo ay wehliyaan 3 ama 4 GB oo RAM ah iyo 32 ama 64 GB oo ROM ah, 13 megapixel camera, autofocus, sawirka faraha, 3.000 mAh baytariga iyo sir kale oo qarsoon oo fiican. Qiimaheeda? Waad heli kartaa on Amazon in ka yar 200 euro.
Waxaanan joojin doonnaa xulitaankan moobiillada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan oo leh moodal laga leeyahay South Korea Samsung. Waxay ku saabsan tahay Galaxy J7, terminaal noo yimaada Super AMOLED bandhig 5,5-inch Full HD, processor-ku-shaqeysiga EXYNOS 8890 oo ay wehliyaan 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd gudaha ah, 13 megapixel camera weyn oo leh flash flash iyo astaamo kale. Meesheeda daciifka ah, nidaamka qalliinka, Android 5.1.
Sidaad qiyaasi karto, waxaa jira boosteejooyin kale oo fara badan oo dhex dhexaad ah, waana cusbooneysiin doonnaa xulitaankan maaddaama aalado cusub u muuqdaan inaan ku darno. Sikastaba xaalku ha ilaawin taas mobilada ugu fiican maahan midka ugu qaalisan, mana ugu caansan, laakiin waa midka sida ugu fiican u daboolaya baahiyahaaga iyo rajooyinkaaga.
Waa maxay casriga dhexe
Sidii aan horeyba u soo tilmaannay bilawgii qoraalkan, ka hor inta aynaan ka hadlin moobiillada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan, waa inaan fahanno oo aan ogaanno waxa dhexdhexaadku yahay. Iyo sidii aan sidoo kale u horumarnay, xariiqa kala-sooca bartamaha-dhexe waa xariiq aad u khafiif ah oo shakhsiyan ah.
Waxa ugu horreeya ee laga feejignaado waa taas Ma jiro corpus caadi ah oo dejiya waxa dhexdhexaadku yahay (ama baaxadda sare, ama heerka hoose) haddaba, markii la kala saarayo terminaalka oo aan dhex dhigeyno mid ama nooc kale, waxaan daawan doonnaa dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan awoodda iyo waxqabadka, tayada agabkeeda iyo, dabcan, qiimaheeda , iyo kuwo kale. Kulligeen waan iska cadnahay in taleefan casri ah oo ka samaysan caag oo lagu iibiyey cusub konton euro uu yahay moobiil hooseeya Si la mid ah, qofna shaki kama qabo in taleefannada casriga ah ee 800 euro, oo lagu dhisay muraayad iyo bir, oo leh leica lenses iyo 6 GB oo RAM ah ay yihiin mobiil heer sare ah (aad u sarreeya ama sarreeya). Laakiin waa maxay waxyaabaha iyo astaamaha runtii qeexaya aaladaha hadhay midba midka kale.
Awooda iyo waxqabadka
Sanadihii la soo dhaafay, awoodda wax-qabad ee Chips-ka ee ka kooban moobiilladayada ayaa sii kordhayay, sidaas darteed, heerka awoodda jibbaar sare dhamaadka hal ama laba sano ka hor, maanta waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay heer dhexe. Tusaale ahaan waan tilmaami karnaa taas Processor Qualcomm 600 Taxanaha (Snapdragon 660 ama 630, iyo kuwa kale) waxay u dhigmayaan heerka dhexe ee hadda jira si kastaba ha noqotee, laga yaabee sanadka 2018 ama 2019 inay horeyba u noqon doonaan kuwo hooseeya Xaaladdan waxaa lagu soo celiyaa shirkadaha wax soo saarayaasha kale ee wax soo saara sida Mediatek (kuwa ugu badan ee loo isticmaalo moobiillada dhex-dhexaadka ah), Exynos (oo ay soo uruurisay Samsung) ama HiSilicon Kirin oo ay soo wada ururiyeen shirkadda Huawei.
Tayada qalabka iyo qaybaha
Waxay u badan tahay, qof kasta oo aan weydiinno inuu si dhakhso leh nooga jawaabi doono in taleefanka casriga ah ee lebbiska balaastigga ah uu yahay taleefan casri ah oo tayo liita, laakiin tani had iyo jeer ma ahayn sidaas, mana aha qodobka kaliya ee farageliya arrintan marka la eego tayada qalabka . Markaan isku dareyno qodobo qaar iyo kuwo kale, waxaan heli doonaa waxyaabo ka reeban, laakiin shaki la'aan waa tayada agabyada taas oo keenta farqiga ugu badan ee u dhexeeya safafka hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sare taleefannada. Guud ahaan, halka moobilada-dhamaadka-sare ay adeegsadaan bir iyo muraayad ay ilaaliso Gorilla Glass ku dhowaad iyada oo aan laga reebin, moobiillada dhex-dhexaadka ah waa in aan lala yaabin haddii aan ka helno moodello guryo caag ah ka sameysan iyo muraayadaha ay ilaalintoodu daciif tahay.
Wax aad u eg ayaa ku dhaca qaybaha kale ee taleefannada gacanta sida darajadooda ama shahaadadooda u adkaysiga boodhka iyo biyaha (sida caadiga ah, way u muuqataa oo way fiicnaaneysaa marka aannu kor ugu kacno baaxadda), tayada kamaradaha ama joogitaanka faraha, faraha hore, loogu talagalay qaybta-dhamaadka sare oo hadda ku jira noocyo kala duwan oo taleefannada dhexdhexaadka ah.
Waxaan u dhaafay ugudambeyn taas oo dhamaanteen aan ka fikirno marka hore marka la aasaasayo baaxadda uu taleefanka iska leeyahay (ama kiniin, ama laptop, ama telefishan ...): qiimaha. Maaddaama ay tahay inaan dhigno sagxad iyo saqaf, waan xaqiijin karnaa taas Ku dhowaad dhammaan mobilada dhexdhexaadka ah waxay leeyihiin qiimo bilow ah oo u dhexeeya 150 iyo 250 euro (in kasta oo qaabeynta dhammaystiran ay yeelan doonto qiimo sare) in kastoo, dabcan, ay jiraan waxyaabo ka reeban, labadaba kor iyo hoosba. Iyadoo aan la galin sicirka sarrifka, ama dallacaadaha ama wax la mid ah, soo saare kasta ayaa ku dhejin kara wax soo saarkooda qiimaha ay iyagu doonayaan sidaas darteedna, in mobiilku uu ku bilaabmayo qiimo dhan 300 euro oo ah nooca ugu badan ee aasaasiga ah uusan si otomaatig ah u tusinaynin inuu yahay mid heer sare ah , sida casriga casriga ah ee 100 euro uusan qasab ku noqon inuu ahaado mid hooseeya qiimahiisa awgood. Si loo go'aamiyo qodobkaan, waa inaan baarno dhinacyada sida kuwa aan kor ku soo sheegnay: tayada qalabka, waxyaabaha ka kooban, awoodda, iwm.
Sidaa darteed, yaanan luminin xaqiiqda ah in dhexda-dhexe aan lagu qeexin dhinacyada kor ku xusan ee si gooni gooni ah loogu arkay, laakiin taa bedelkeeda waxaan u baahanahay inaan helno aragti guud si loo ogaado in mobilka uu qeyb ka yahay bartamaha, ama maya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Telefoonnada gacanta dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan
Liis aad ufiican Jose, in kastoo qaarkood lawaayo, sida:
- Sharafta 6X Premium
- Moto Z Ciyaar
Ku jawaab NewEsc
Barnaamijka cimilada ee OnePlus ayaa hadda laga heli karaa Play Store
Hadda waxaad ka heli kartaa muraayadahaaga Snapchat ee Amazon